Kabaha gacanta labaad - hissenglobal.com
Kabaha Gacanta Labaad
Ma doonaysaa inaad dalbato kabo la isticmaalay oo tiro badan? Marka Hissen caalami ah, hubaal waanu buuxin karnaa shuruudahaaga. Haddii aad raadinayso alaab-qeybiye leh sahay deggan oo tayo la isku halleyn karo, waxaan aad u diyaar u nahay inaan ku caawinno oo aan kula shaqeyno.
Tayada Had iyo jeer waa qodobka ugu muhiimsan wax kasta oo aan samayno. Kabaha la isticmaalo iyo Dhar la isticmaalay waxaa la filayaa inay noqdaan kuwo tayo sare leh waxaanan dooneynaa inaan marnaba niyad jabin macaamiisheena.
Waxaan leenahay a set gaar ah oo heerarka tayada kaas oo diiradda saaraya faahfaahin gaar ah oo kabaha si ay uga dhigaan in aan la iibin oo kaliya laakiin sidoo kale faa'iido u leh iibsadaha. Waxaan rabnay inaan hubinno inaan bixinno kabo tayo wanaagsan leh, dalool malaha, ilmada, wasakhowga, xidhashada yar ee cidlada, xargaha oo aan hagaagsanayn, cabbir joogto ah, ma yaraan Kabaha laga bilaabo noocyada waaweyn sida Nike, Adidas, iwm, laakiin sidoo kale laga bilaabo noocyada Shiinaha.
Hissen Global waxa ay filaysaa kobaca hormuudka ka ah alaab-qeybiyaha adduunka oo dhan, sidaas awgeedna waxaan awoodnay inaan siino nooca ugu wanaagsan ee alaab-qeybiyeyaashayada.
la isticmaalo kabo isku dhafan
loo isticmaalo kabaha Brand
Kabaha isku dhafan ee la isticmaalo
Ragga la isticmaalay Sport Snabarro
Kabaha Calaamadaha La Isticmaalay
Kabaha maqaarka ee la isticmaalo
Kabaha Dumarka La Isticmaalay
Kabaha carruurta ee la isticmaalo
Skates la isticmaalay
Kabo badan >>
Wali ma helin waxa aad raadinayso?
Kala xidhiidh la taliyayaashayada si aad u hesho badeecooyin badan oo diyaar ah.
Codso Xigasho Maanta
Maxaad u dooratay Hissen Global Kabaha La Isticmaalay
Waxaan haynaa heerar tayo gaar ah oo diiradda saaraya faahfaahinta gaarka ah ee kabaha si aan uga dhigno kuwa aan iibin oo keliya laakiin sidoo kale faa'iido u leh iibsadaha. Waxaan rabnaa inaan hubinno inaan bixinno Kabo tayo fiican leh, dalool malaha, ilmada, wasakhowga, xidhashada yar ee cidlada, xargaha oo aan hagaagsanayn, cabbir joogto ah, ma yaraan Kabaha laga bilaabo noocyada waaweyn sida Nike, Adidas, iwm, laakiin sidoo kale laga bilaabo noocyada Shiinaha.
Waxaan leenahay sanado badan oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan baakadaha, alaab-qeybiyaha kale wuxuu kaliya ku rari karaa 900 oo jawaan oo kabo la isticmaalay weel 40 cagood ah, waxaan ku xiri karnaa 1050 boorso. Halka annaga waxay kaa badbaadin kartaa lacag badan kharashyada dhoofinta.Maadaama aan badeecadaheena u dirno meelo kala duwan oo ay marto dhammaan habka rarida iyo saadka, waxaa muhiim ah in baakadu ay awood u yeelato inay badbaado safarka oo dhan.
Sidee baa kabahayagii hore kuugu soo gaadhi lahaayeen? Maxay yihiin meelaha ay soo mari lahayd si ay kuugu soo gaadho iyada oo aan dhibaato iyo wax kasta oo kale ahayn? Waan isticmaalnaa ku haboon gaadiid.Waxaan wadashaqeyn qoto dheer la leenahay dhammaan shirkadaha waaweyn ee maraakiibta waxaanan leenahay faa'iido qiimo leh oo xooggan, taas oo awood u leh kaydi qiimahaaga dhoofinta, waxaana aanu ku bixin karnaa adeega cashuuraha ee dhawrka dekedood ee caanka ah ee Afrika, kuwaas oo kaa badbaadin kara wakhtigaaga iyo tamartaada.
Waxaan leenahay shaqaale iibiye xirfad leh si ay kuu siiyaan dhammaan adeegga iibka ka dib ee kabaha la isticmaalay. Waxaad si fudud u xakameyn kartaa dhammaan dhinacyada wax soo saarka, rarista, rarida iyo fasaxa kastamka. Si loo wanaajiyo khibradaada, asxaabteena iibka ayaa kuu soo diri doona warbixino iyo muuqaalo kormeer tayo maalinle ah.
Ka baadh qaybaha alaabtayada
– Dhar la isticmaalay & kabo la isticmaalay iyo bacaha la isticmaalay
Dharka xagaaga ee la isticmaalo Dharka Jiilaalka ee la isticmaalo Dharka dumarka ee la isticmaalo Dharka ragga ee la isticmaalo
Dharka Carruurta La Isticmaalay
KABAHA LA ISTICMAALAY
Kabaha isku dhafan ee la isticmaalay Dhar Sumaysan oo La Adeegsaday Kabaha Kubadda Cagta ee La Isticmaalay Sneakers la isticmaalay La isticmaalay Fashion Lady Shoes
BAASHA LA ISTICMAALAY
Bacaha la isku daray ee la isticmaalay Bacaha dumarka ee la isticmaalo Bacaha Iskuulka ee la isticmaalay Bacaha Summadaha leh ee la isticmaalay Boorsada dhabarka ee la isticmaalay
WAXYAABAHA LA ISTICMAALAY
Alaabta la isticmaalo Daah Gacan Labaad Goosha sariirta ee la isticmaalay Busto Gacan Labaad Kabka Gacanta Labaad
Dharka Gacanta Labaad ee Hogaaminaya Dhoofinta
Waxaa laga yaabaa inaad u jeedday siyaabo kala duwan oo aad ku aamini karto shirkaddayada. Waxaan ognahay in laga yaabo inay adag tahay oo ay u baahan karto habab badan si aad u eegto waxa aan ku siineyno amar kasta si aad u aragto inaan dhab ahaantii aamin nahay oo u qalmo miisaaniyadaada ganacsigaaga.
Taas, aan kuu sheegno qaar ka mid ah faa'iidooyinka aad ka heli karto markaad wax ka soo iibsato shirkadeena.
Hissenglobal waa mid ka mid ah dhoofiyeyaasha weelka buuxa ee dharka la isticmaalo ee Shiinaha. Waxaan leenahay 2 warshadood oo waaweyn oo bedkoodu ka badan yahay 20,000 mitir oo laba jibbaaran iyo in ka badan 400 oo shaqaale ah. Iyadoo 50 shaqaale ah oo ku takhasusay kala-soocidda kabaha, waxaan soo saari karnaa 2 40-cagood oo sare oo kabo ah maalintii.
Waxa aanu leenahay hab-maamuus gaar ah iyo nidaam tababar oo noo ogolaanaya in aan doorano shaqaalaha ugu fiican ee yaqaana sida loo maamulo dharka la isticmaalay iyo alaabta la isticmaalay oo aan u kala saarno si habboon oo aan faa'iido u lahayn shirkadda laakiin faa'iido u leh iibsadayaashayada. Muddo dheer waxaanu adeegsanaynay habab kala duwan iyo hab-maamuus, waayo-aragnimadaasi waxay noo ogolaatay inaan dooranno kuwa saxda ah ee noo shaqayn lahaa.
Kabaha la isticmaalo ee Hissenglobal waa kuwo aad u tayo wanaagsan, waxaan wada shaqaynaynay muddo saddex sano ah weligayna igama dayn.
Hissen international aad buu u mudan yahay, 3 maalmood ka dib markii lacagta la raro lana soo raro, taas oo xalisay baahidii degdega ahayd.
Waxaan kabo ka soo iibsaday warshado kale ka hor intaanan la shaqayn hissenglobal, laakiin mar kasta waan niyad jabay. Doorashada Hissenglobal waxay ii keentay faa'iidooyin waaweyn. Tayada sare ee xasilloon ee kabaha la isticmaalo waa wax aan suurtagal ahayn in warshadaha kale ay gaaraan. Thanks to hissenglobal, waxaan helay aqoonsiga suuqa!
Farqiga u dhexeeya Hissenglobal iyo Alaab-qeybiyeyaasha kale
Qalabka ceeriin ee tayada sare leh waxay ka yimaadaan Shiinaha, Iyo midabada ayaa dhalaalaya marka loo eego kuwa Yurub iyo Ameerika, kuwaas oo si fiican u dabooli kara baahida suuqa Afrika.
Kala-soocidda Xirfadlayaasha:ilaa qaybaha 150, Kala-soocida wax ka badan 5 sano ayaa si fiican u xakameyn kara heerarka tayada si loo hubiyo inaad ku siin karto alaab deggan oo tayo sare leh
Saddex hubin oo tayo leh, si loo hubiyo in Heerka darajada ilaa 98%, dalool la'aan, cillado la'aan, la'aan isticmaalka xad dhaafka ah, iwm.
Baakad hufan: 12 balers waxay ku rari karaan 280 tan oo dhar gacan labaad ah maalintii. Hal weel ayaa lagu rari karaa 3 maalmood gudahood
Soodejis xirfadeed, 10% in ka badan alaab-qeybiyeyaasha guud, badbaadinta xamuulka
Adeeg dhoofinta xirfadeed, la shaqeeyaan in ka badan 200 oo shirkadood oo maraakiib ah, oo ka wanaagsan qiimaha dhoofinta.
Qalabka ceeriin ee Yurub iyo Maraykanka oo leh qiimo qaali ah iyo hal midab
Qaybaha badeecooyinka keligood ah had iyo jeer kuma habboona liiska baakadaha, kuwaas oo inta badan aan buuxin shuruudaha kala duwan ee iibsadayaasha.
Xakamaynta tayada maaha adag, Badeecooyin badan oo B ah ayaa lagu soo qaataa nooca A, ma aha oo kaliya inay keenaan khasaare lacageed oo shirkad ah, laakiin sidoo kale waxay luminayaan kalsoonida iyo kalsoonida macaamiisha.
Weelku wuxuu qaataa nus bilood in la raro, iyo waqtiga dhalmada oo dib loo dhigay.
Masters of the loading cabinet waa kuwo aan khibrad lahayn, weel 40 cagood ah waxaa lagu rari karaa 26 tan oo kaliya. Xamuulka qiimuhu aad buu u badan yahay, qiimuhu aad buu u kordhay.
Xoog malaha, oo kaliya tiro yar oo shirkado maraakiib ah, qiimaha sare ee maraakiibta ayaa hoos u dhigaya faa'iidada, ma jirto lacag lagu kasbado.
Ka dib markii la helo lacagta, Iibka ayaa bedelay dabeecadda, iyo diido adeegga, taas oo ka dhigaysa macaamiisha walaac.
Yurub iyo Maraykanka ee alaabta ceeriin, qiimuhu waa qaali, hal midab.
Qaybo badan maaha, kuma habboona liiska baakadka. Waxay rabaan qaybo badan oo aysan u baahnayn.
Xakamaynta tayada ma wanaagsana, Badeecooyin badan oo B ah, luminta lacagtu waa arrin yar, laakiin sidoo kale luminta kalsoonida, luminta macaamiisha
Weelku wuxuu qaataa nus bilood in la raro, wakhtiga keenista oo daahay. Kalsoonida luntay
Ustaadkii golaha wasiiradda rarida oo aan khibrad lahayn, weel 40 cagood ah waxaa lagu rari karaa 26 tan oo kaliya. Qiimaha xamuulka aad ayuu u badan yahay, qiimuhu aad buu u kordhay.
Xoog malaha, oo kaliya oo leh tiro yar oo shirkado maraakiib ah, kharashka dhoofinta ayaa aad qaali u ah, ma jirto lacag lagu kasbado.
Ka dib markii la helo lacagta, Iibka ayaa bedelay dabeecaddaadeeg la'aan, wadnuhuna aad buu u cabsanayaa.
La xidhiidh HissenGlobal
qaado in Taabo Hadda
Kontrool Tayo Wanaagsanl
Alaabta ceeriin oo tayadoodu sareyso
Adeegyada Maraakiibta Xirfadleyda
Adeegga iibka ka dib oo aad u wanaagsan
Si laguu siiyo xal wanaagsan, fadlan buuxi macluumaadka dhabta ah
Tiradaada≥100 bales (4500kg)≥Hal 40ft weel (28000kg)≥Laba Konteenar 40ft (56000kg)≥Shan 40ft weel (135000kg)
Halkeed wax ka soo iibsatay ka hor
GobolkeeEuropeShiinahaAmericaPakistan IndiaBariga DhexeTogo BeninKuuriya JapanMeesha Deegaankaaga
Ma ku leedahay Shiinaha wakiilka maraakiibta
Waad ku mahadsan tahay inaad nala soo xiriirto . Kooxdayada iibka ayaa kuugu soo jawaabi doonta 12 saacadood gudahood.